Home Wararka Uganda oo Soomaaliya u soo dirtay Ciidamo ka qeyb qaata howlgalka ATMIS
Uganda oo Soomaaliya u soo dirtay Ciidamo ka qeyb qaata howlgalka ATMIS
Dowladda Uganka oo kamid ah dalalka ay Soomaaliya kajoogaan Ciidamada ku howlgalka Magaca AMISOM ayaa waxaa ay Soomaaliya u soo dirtay Ciidamo horleh, kuwaas oo ka qeyb qaadabaya howlgalka ATMIS.
Munaasabad lagu soo sagootinayay Ciidamadaas oo ka dhacday dalka Uganda ayaa waxaa ka qeyb galay Taliyaha Ciidanka Difaaca Uganda (UPDF) Gen. Wilson Mbasu Mbadi ,wuxuuna Ciidamada kula dardaarmay inay waajibaadkooda u gutaan si wanaagsan kana hortagaan weerarada Al-Shabaab.
Markaad aadeysaan Soomaaliya, iska hubiya inaad soo laabataan idinkoo bad qaba. Al-Shabaab waxay idinku tahay halis weyn. Waa inaad aad uga taxadirtaan inay helaan xoriyad ay ku geystaan ​​falal argagixiso. “ayuu yiri Gen. Mbadi.
Previous article(Xog) RW Saacid oo geed-fadhi u noqday siyaasadda Farmaajo, deegaana ka sameeystay Villa Soomaaliya
Next articleMaxkamad kutaala Uganda oo soo saartay go’aan ku saabsan Soomaalida